सबैभन्दा उपयोगी तौल घटाउने पेय पदार्थ, हप्तामा एकपटक पिउनुस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
सबैभन्दा उपयोगी तौल घटाउने पेय पदार्थ, हप्तामा एकपटक पिउनुस् !!
यो पेयपदार्थले शरीरलाई आलस्य र ढिलासुस्ती हुनबाट बचाउँछ । यो पेयपदार्थले शरीरलाई डिटोक्स गराउँछ । शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ । यो पेयपदार्थमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ । जसले रोगप्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्छ । यसले शरीरलाई सुख्खा हुन दिँदैन । यो पेयपदार्थमा मेटाबोलिज्म धेरै हुने भएकाले तीव्र गतिमा तौल घट्छ । (रातोपाटी बाट सभार)